Inona no dikan'ny volana febuari: vato nahaterahana februari, famantarana zodiak, voninkazo, isa ary maro hafa! - - Hevitry Ny Tandindona
Inona no dikan'ny Febroary? Vato fahaterahana tamin'ny volana febuari, famantarana zodiaka, voninkazo, isa ary maro hafa!
Inona no dikan'ny Febroary?
Vato fahaterahana tamin'ny volana febuari, famantarana zodiaka, voninkazo, isa ary maro hafa!
Iza no milaza fa ny fahazoana ny laharana faha-2 dia somary nilavo lefona? Marina, taorian'ny tabataba sy firavoravoana tamin'ny fetin'ny Taom-baovao tamin'ny volana Febroary dia toa nilamina tamin'ny fampitahana. Ny ankamaroan'ny olona dia mandray an'io fotoana io amin'ny fofonaina sy ny famerenana amin'ny laoniny avy amin'ny firohotana tamin'ny fialantsasatra voalohany.
fampifangaroana ny lehilahy sy ny vehivavy aquarius
Noho ny fomba fanao romanina nankalazana ny volana febroary ho iray volana fanadiovana, dia mitoetra hatrany ny tandindon'ny metaphysical ny fanadiovana, ny fanadiovana ary ny fanadiovana ny tenantsika amin'ny fihenan-tena. Izany dia mahatonga ny volana febroary ho fotoana tena tsara handanjalanjana ny Chakras ary mahazo ny anao saha auric miverina milamina.
Ho fanampin'izany dia mety handinika fombafomba sy ozona ho an'ny fahasalamana ianao. Raha nisafidy an'io fomba io ianao dia tadidio ny mampitovy ny ezaka ara-panahy ataonao amin'ireo zavatra ara-batana. Ireo fototra rehetra nampianarin'i Neny dia tena miasa. Mihinàna tsara, miala sasatra be dia be, mazotoa miasa ara-tsaina sy ara-batana - mankalazà ny angovo avy amin'ny fiasanao amin'ny fomba fiainanao isan'andro.
Ny volana faha-2 amin'ny taona dia volana fahatelo amin'ny ririnina. Ity no volana fohy indrindra, 28 andro sy 29 andro monja isaky ny taona mitsambikina (efa-taona no misaraka). Noho io fe-potoana fohy io dia ny volana febroary no hany volana afaka mandalo nefa tsy miseho iray volana feno. Ny volana febroary lasa teo tsy nisy volana dia tamin'ny 1999.
Tany Roma, ny volana Janoary sy Febroary dia karazana toy ny eritreritra. Izy ireo no farany nampidirina tamin'ny kalandrie satria hitan'ny Romana fa 'tsy misy volana' ny ririnina. Faha-2 lasa volana ofisialy tamin'ny volana feb. Amin'ity vanim-potoana ity dia mety hifarana ny 23, 24 na 27 ny volana Febroary handanjalanjana ny fivoaran'ny vanim-potoana. Tamin'ny fametrahana ny kalandrie jolianina dia nahazo 28 andro maharitra tamin'ny faran'ny iray taona (faran'ny taona) i febroary.
Nisy anarana tena voafaritra ho an'ny volana februari manerantany. Amin'ny volana anglisy taloha dia volana feno fotaka io. Amin'ny fiteny failandey dia volana perla ny volana febreo, angamba manondro ny fijerin'ny ranomandry sy ny lanezy ny zava-drehetra. Ary ny Makedoniana dia niantso azy io hoe ny volana fanapahana (izany hoe hazo fanangonam-bokatra).
Misy angano mahaliana roa momba ny volana feb. Lazain'ny Romana amintsika fa i Diana, ilay andriamanibavy mpihaza, dia nivoaka tamin'ny 12 feb. Hiampita ilay tany izy, ary manome fiarovana ho an'ny faritra lavitra. Ny olona manana fitsingerenan'ny andro nahaterahana amin'ity daty ity dia ho mahafinaritra sy ho tia fiaraha-monina.
Avy eo, mazava ho azy, misy ny Andro Leap Year. Misy ny olona mahatsapa fa ireo teraka tamin'ity andro ity dia manana vintana eo anilany. Nino ny Grika fa ny mpivady dia tsy tokony hanambady na hisara-panambadiana na oviana na oviana satria Leap Year satria midika olana amin'ny mpivady, na fiainana manirery ho an'ilay nisara-panambadiana. Farany, ny fomban-drazana Irlandey dia milaza fa ny vehivavy dia afaka mangataka lehilahy hanambady azy (ary hanana vintana kokoa amin'ny fahazoana eny).
Vato Fiterahana tamin'ny volana febuari: Amethyst
ametysta dia iray amin'ireo vato masina misy majika fampiharana marobe. Manerana an'i Egypta dia nitafy azy ny olona, ​​herim-po sy fiarovana azo antoka avy amin'ny ody mahery setra. Ny kolontsaina Greco-Roman dia nahita azy io ho toy ny vato manasitrana. Fanampin'izany, ny tantaran'i Dionysus dia mampifandray an'io Andriamanitra io amin'i Amethyst, manome azy hery hiarovana ny olona iray amin'ny fahamamoana sy poizina. Izany no antony nanamboarana kaopy taloha tamin'ny amethyst na nampidirina an'ity vato ity ho fanampiny haingon-trano.
Ireo izay manana olana amin'ny torimaso dia afaka mametraka an'i Amethyst eo ambany ondana. Eto dia manamaivana ny adin-tsaina, ny fanahiana ary ny fahaketrahana. Manentana ny fanahy koa izany nofy sambatra . Ny fampiasana sombin amethyst fisaka ho toy ny fikosehana amin'ny handrinao dia manampy amin'ny fanamaivanana ny aretin'andoha koa.
Amethyst dia niseho tao amin'ny kitapo mpanasitrana maro ho fifantohana amin'ny herin'ny fitsaboana. Izy io dia nankasitrahana noho ny olan'ny rà sy ny sery na ny olana hafa amin'ny fifohana rivotra. Ny vato ihany koa dia mampihena ny tahotra avy amin'ny marary.
Famantarana Zodiac tamin'ny volana febuari: Aquarius & Pisces
Manomboka ny faran'ny volana amin'ny Aquarius heverina ho an Famantarana ny rivotra izay samy entin'i Uranus sy Saturn.
Ny Aquarian dia malala-tsaina sy mitady endrika mialoha, na izany aza dia afaka mahita azy ireo ara-pientanam-po koa izy ireo. Rehefa miara-miasa amin'ny hafa ny olona teraka eo ambanin'io famantarana io dia mpihaino mavitrika izy ireo ary mahomby.
Na dia saro-kenatra sy mangina toa ny Aquarians aza aho dia aza manadino velively ny fampanantenanao amin'izy ireo. Tsy hamela izany mihitsy izy ireo na hanadino izany. Ny Water Bearer dia mpandinika matotra izay mampiasa ny fahalalany mba hampifanaraka, indrindra rehefa sendra misy ny fotoana mety. Ny fanahy Aquarius dia an'ny fahitana, ka izany no antony tsy fankafizan'izy ireo ny famerana.
Amin'ny 19 febroary dia miditra amin'ny mariky ny TRONDRO , ny trondro. Pisces dia a Singa rano ary i Neptune sy Jupiter no mitondra azy. Pisces no mpanonofy ny zodiaka. Mirona amin'ny kanto foana izy ireo, indrindra ny mozika. Haingana fitokisana, ireo olona mahita ny toetra am-po an'ity Pisces mora voa ity.
Mankany amin'ny trondro milomano ny olona! Ny toetran'izy ireo manampy dia miorina amin'ny fahaiza-manao intuitive izay matetika tena marina. Ity dia famantarana feno fahendrena, fandeferana ary fahefana hamela heloka.
Natokana ho an'ny lohahevitra maro ny volana febroary rehetra. Volana Black History izy ity ary Volana fon'ny Amerikanina ho an'ny vao manomboka. Avy eo dia misy fialantsasatra izay miova ny datin'ny fitandremana azy ireo mifanaraka amin'ny fotoana (toy ny zoma voalohany, na alatsinainy fahatelo). Anisan'izany ny National Wear Red day, World Interfaith Harmony Week, Autism day (UK), World Marriage Day, Stand up to Bullying Day ary iray amin'ireo ankafizinay indrindra - Sokafy iny Alina tavoahangy iny.
Miroso amin'ny fankalazana amin'ny daty voafaritra isika dia manomboka amin'ny Imbolc (2/1) fialantsasatra ankalazan'ny Pagano sy Wiccan maro. Andro Groundhoghog (2/2), Andro Ronald Regan (2/6), Fetin'ny Pizza Nasionaly (2/9 - yum!), Andro mpamorona (2/11), Andro eran-tany amin'ny radio (2/13), ary Andron'ny mpifankatia (2/14) manome satroboninahitra ny tapany voalohan'ny volana feb. Mifindra amin'ny tapany faharoa amin'ny volana isika dia manana an'i Susan B. Anthony Day (2/15), Andro manerantany ho an'ny rariny ara-tsosialy (2/20), Fetim-pirenena Margarita (2/22), Fetin'ny Mena Mena Nasionaly any Angletera (2 / 26), Andro iraisam-pirenena ho an'ny bera (2/27) ary ny fetin'ny bakalorea any Angletera (2/29).
Andao jerena akaiky ireo hetsika roa: Imbolc sy Fetin'ny mpifankatia. Imbolc dia Fetin'ny afo manamarika ny antsasaky ny làlana amin'ny taona - ny fiovana amin'ny alina lava indrindra ka hatramin'ny halavan'ny andro. Ny labozia sy ny doro afo dia miseho manodidina ny tany izay ahafahan'ny olona mivory manome voninahitra an'i Brigid (eo anelanelan'ny Selta) ho andriamanibavin'ny fahavokarana sy fahasalamana. Imbolc dia miresaka momba ny mety sy ny fiandohan'ny fisehoana azy ireo.
Fetin'ny mpifankatia no andro tsy iadian-kevitra momba ny fitiavana amin'ny endriny rehetra. Manidina eo anelanelan'ny tany sy ny lanitra i Cupid manampy ny mpivady mpivady lalana hahita ny diany. Misy vintana lehibe ny fifandraisan'ny Andron'ny mpifankatia amin'ny fetibe romana taloha (sy somary lavalava), Lupercalia izay nankalaza ny fahavokarana.
Voninkazo Febroary: Violet
Ny tandindon'ny foara Violet fiovana misy fahasamihafana ao Color . Ny volomparasy manga dia maneho fandavan-tena, ny fahadiovan'ny fotsy ary ny mavo dia maneho asa sy fikasana tsara. Ny fiteny Victorian Language of Flowers dia nampiasa violet hanehoana fitiavana na fankasitrahana.
Nampiasain'ny Grika i Violet ho tandindon'ny vintana sy fampiroboroboana, indrindra rehefa hita amin'ny nofinao. Amin'ny sehatra hafa, zava-kanto ara-pivavahana, i Violet dia mampita ny hevitry ny fahitana ara-panahy voalanjalanja amin'ny fahamaotinana. Ny hevitr'i Violets ho sarin'ny decorum dia nitohy nandritra ny Renaissance iray manontolo.
Volana volana febily: 2
ny isan'ny planeta ao amin'ny rafitry ny masoandro
Ny isa 2 ao amin'ny Numerology manana fifandraisana amin'ny Vehivavy masina. Io no herin'ny mpiambina fandriam-pahalemana, feno famelan-keloka sy fahaiza-mandanjalanja. Ny fiteny roa an'ny fitiavana dia ny fanompoana. Mba hahatongavana amin'izany dia misy fanetren-tena lehibe amin'ny fihozongozona an'ity isa ity.
Amin'ny teny maoderina, ny roa dia ny vehivavy matanjaka ao ambadiky ny lehilahy, amin'ny fahombiazana eo amin'ny fanampiana any aoriana. Ny herin'ny volana febroary dia tsy sahisahy ratsy amin'ny lesona ampianariny fa manatrika torohevitra tsara sy fahiratan-tsaina kely.
Toy ny isa 2, ny angovo febroary dia afaka mahatsapa mahavelom-bolo sy mampahery. Angamba io dia ampahany amin'ny fisarihana ny andron'ny mpifankatia. Ny roa koa dia manatsara ny fahatakarantsika ny natioran'olombelona sy ny fahitana ny fomba tsara indrindra hahombiazana amin'ny tanjona tsara. Na fohy aza ny volana febroary, dia tsy afaka maimaika ny lesona ao.
Ny roa dia manana mozika ao amin'ny fanahiny. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, volana febroary tsara hametrahana an'io rock n 'roll sy dihy taloha ao an-dakozanao io. Na mitendry amponga .. tena karazana mozika mampiakatra ny fanahinao sy mitondra anao mankany amin'ny fifalian'ny lohataona eo akaiky eo fotsiny.
Colors loko: Violet
Toy ny mahafinaritra Violet ary tena mihetsiketsika ametysta , Ny loko febily dia LAMBA VOLOMPARASY . Anisan'ireo loko tsy fahita firy indrindra amin'ny natiora, ny volomparasy dia manana ny halavan'ny halavany avo indrindra amin'ny avana. Tamin'ny sivilizasiôna sivilizasiôna taloha dia nisy loko volomparasy niseho tamin'ny taona 1900 TK. Tena sarotra ny nahazo tamin'ny loharano toy ny akorandriaka ka lasa loko ho an'ny mpanjaka sy ny tena mpanankarena. Ny hevitra hoe loko volomparasy dia loko marevaka mandraka androany.
Ny volomparasy dia maneho ny majia sy ny ara-panahy eo amin'ny tontolo metafizika. Mihovotrovotra amin'ny herin'ny voninahitra sy ny famoronana. Ny aloky ny volomparasy koa dia misy dikany isan-karazany. Ny volomparasy maivana dia maneho fifaliana sy tantaram-pitiavana raha ny aloka mainty kosa dia misy lojika sy andriana. Ny ankizy ara-tsaina dia mamaly ny volomparasy ho loko mahafaly, tsy misy ahiahy.
Ao amin'ny Kalandrie Celtic Rowan sy Ash dia mizara ny volana Febroary. Ash dia maneho fiovana (mety tsara amin'ity volana ity), fanavaozana ary fampahafantarana bebe kokoa. Hazo mahatalanjona amin'ny famoronana sy ny hafanam-po koa izy io.
Niaiky ny hazo Rowan ny Celts noho ny hatsaran-tarehiny fa ny faharetany koa. Ny sanda ara-panoharana ankapobeny nomena an'i Rowan dia misy fanavaozana, fiarovana, fanovana tsara, fitoniana, fahatsiarovan-tena ary fahasalamana. Ny iray amin'ireo zavatra mahaliana momba ny hazo Rowan dia ny fahitana azy ireo miroborobo any amin'ny toerana tsy ampoizina indrindra, manararaotra ny toerana tsara indrindra amin'izay fotony!
Volana Feno Volana
Ny Full Moon amin'ny volana Febroary dia manana anarana roa. Ny iray dia Full Hunger Moon, manondro ny zava-misy fa sarotra ho an'ny foko ny mihaza amin'ny ririnina. Ny anarana faharoa eo amin'ireo foko avaratra sy atsinanana dia ny volan'ny Snow Moon.
Amin'ny fomba majika ity dia fotoana mety hifantohana amin'ny tokantrano sy trano. Ampiasao amin'ny fomba hafa ny herin'ny volana oram-panala hieritreretana ny mety hitranga - ireo voa rehetra eo ambanin'ny lanezy ireo dia miandry fotsiny ny hiposaka.
Ny zava-misy tamin'ny volana feb
Ny volana febambra irery no volana manana efatra herinandro 7 andro isaky ny 6 taona.
Ny volana martsa sy novambra dia manomboka amin'ny andro fiandohan'ny volana febroary ihany afa-tsy mandritra ny taom-pilalaovana raha toa ka taratry ny volana aogositra.
Ny volana oktobra dia mifarana amin'ny andro iray amin'ny herinandro amin'ny faran'ny volana febroary.
Ny olona teraka tamin'ny taona Leap dia matetika mankalaza amin'ny faha-28 fa tsy miandry efa-taona eo anelanelan'ny antoko.
Ny fotoana voalohany nihaonan'ny fitsarana tampony tany Etazonia dia ny 1/1/1790.
Oregon dia lasa fanjakana faha-33 tamin'ny 14 febroary 1859.
Nandeha sambo teo amin'ny Pasifika i Sir Frances Drake tamin'ny 11 Febroary 1578.
John Glen, ny amerikana voalohany nitety ny tany, dia nanao izany tamin'ny 10 febroary 1962.
Groundhog Day (2/2) dia sisa amin'ny finoanoam-poana mpifindra monina Alemanina.
Ny anarana Welsh ho an'ny volana Febroary dia 'volana kely' ary nantsoin'ny Saksons hoe 'volana mofomamy' izy ireo noho ny fanomezana mofomamy ho an'ireo Andriamanitra tamin'ity volana ity.
Ny Super Bowl dia atao amin'ny volana Febroary.
Fitanisana tamin'ny volana feb
'Febroary dia lava raha mbola ilaina mba handaniana ny fotoana hatramin'ny Martsa. - Dr. J. R. Stockton
Nanamboatra tetezana ny volana febroary ary novakivakin'ny volana martsa. ' ~ George Herbert
'Febroary, rehefa toa tsy misy fiafarany ny andro ririnina ary tsy misy fitadidiana an-tsaina afaka mamerina ny rivotra fahavaratra.' ~ Shirley Jackson
'Wan Febroary miaraka am-pifaliana mitomany, ny tànany mangatsiaka izay mitarika ny taona tanora
Midina amin'ny lalana manjavozavo amin'ny fotaka sy tanety,
Alohan'ny tarehy hatsatrao sy mendrika
Ny rivotra mangatsiaka dia manetsika ny rahona milamina
Amin'ny alàlan'ny lanitra dia mety hiakatra ny zara raha maraina.
Ny masonao dia matevina amin'ny ranomaso be,
Saingy mirehitra amin'ny fanantenana fa hanazava ny taona. '
'Mamaky ny rantsanao ny tara-pahazavan'ny volana Febroary ary manapotsitra ny tsimoka ary mamontsina ny ravina ao anatiny.'
'Febroary - volana fitiavana ..? !!
Tsy mahagaga raha ny fohy indrindra amin'ny kalandrie. ' ~ Dinesh Kumar Biran
Fankalazana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana Febroary
Norman Rockwell - 2/3
Charles Lindbergh - 2/4
Charles Dickens - 2/7
Jules Verne - 2/8
Mark Spitz - 2/10
Charles Darwin - 2/12
Galileo - 15/2
Sidney Poitier - 2/20
Steve Irwin - 2/22
Steve Jobs - 2/24
Jackie Gleason - 2/26
Mario Andretti - 2/28
Papa Paul III - 2/29
toerana inona no saturne ao amin'ny rafi-masoandro
miray saina sagittarius sy aquarius
virgo lehilahy tia vehivavy taurus
vehivavy mpinamana taurus vehivavy sy homamiadana